साबधान कतै तपाइ त यस्तोको शिकार बन्नु भएको छैन युवतीको यस्तो धन्धा! केटालाई बिहे गर्छु भनेर बोलाउँदै, – Halkhabar kura
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १२:२७
साबधान कतै तपाइ त यस्तोको शिकार बन्नु भएको छैन युवतीको यस्तो धन्धा! केटालाई बिहे गर्छु भनेर बोलाउँदै,
बिवाह एक पवित्र नाता हो भनिन्छ । तर यसको दुरुपयोग गर्दै केहीले पैसा कमाउने माध्यम समेत बनाएका छन् । कतिपय अवस्थामा महिला समेत यो मामिलामा अगाडि रहेको पाइएको छ ।भारत बिहार राज्यको कैमूर जिल्लामा, पुलिसले दुई जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ जसले विवाहको नाटक गरेर युवाहरूलाई आफ्नो जा’लमा पारेर सबै सम्पति लु’टेर लिन्थिन् । पछि केटोलाई लाई भगा’उन कु’ट्ने पनि गरिन्थ्यो । अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने ती युवती जो युवालाई बिहे गर्न बोलाउँथिन् उनी तीन बच्चाकी आमा हुन् ।
पछिल्लो पटक यूपीको शाहजहाँपुरको सोनू यी महिलाको जा’लमा परे । सुरुमा फोनमा कुराकानी भयो, अनि बिवाहको कुरा तय भयो । युवतीले सोनूका काका काकीलाई पनि भेट गरिन् ।सोनुलाई ती केटी मन पर्यो । सोनूकी आमाले कपडा किन्न भारु १४ हजार दिएकी थिइन् जुन ती केटीले लिएर गइन् । केटी पैसा लिएर हरा’एपछि सोनूले प्रहरीमा गुनासो गरे । पुलिसले ती युवतीलाई पक्राउ गर्यो । धनपति नामकी ती युवतीले प्रहरीलाई आफू जरुरी कामले आफ्नो माइती घर गएको र लकडाउनले गर्दा उतै बस्नु परेको बताइन् ।
भारतीय मिडिया आजतकमा छापिएको समाचार अनुसार, उनी त्यहाँ पसल गर्दछिन् । उनले बताइन् की यो सबै उनकी सौतेनी आमाको योजना अनुसार गरिएको हो । सौतेनी आमाको योजना अनुसार आफूले केटासँग पैसा लिएर आएको र दुईले बाँडेको उनले बताइन् । तर उनको यो पहिलो घटना भने थिएन ।नयाँ केटाहरु सँग चिनजान गर्ने, बिवाह गर्ने योजना बनाउने र केटोको पैसा लिएर अलप हुने उनको पुरानै ध’न्धा भएको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ ।उक्त घटनाको बारेमा जानकारी दिँदै कैमूरका एसपी दिल्नावज अहमदले भने कि उनीहरूले बिहे गरेको नाटक गरेर युवकलाई लु’ट्ने गिरोहको बारेमा जानकारी छ । यस गिरोहका दुई महिला पक्राऊ परेका छन् ।
दुवैलाई सोधपुछ पछि जे’ल पठाइनेछ । आरोपित महिला, जो तीन बच्चाहरूको आमा थिइन्, उनी आफ्नो सौतेनी आमासँगै यस काममा धेरै पहिले संलग्न थिइन् ।उनीहरूलाई सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले दुई महिलालाई जे’ल पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यूपीको शाहजहाँपुरको सोनू यी महिलाको जा’लमा परे । उनले प्रहरीलाई भने कि यी महिलाहरू उनीसँग विवाहको बहानामा फोन गरेर आएका थिए ।उनलाई पछिल्लो दुई तीन महिना देखि कल गरिएको थियो । विवाह हुनुभन्दा अघि ती केटा केटी हेराहेर गर्न उनीहरु सोनूको घर गएका थिए । सांकेतिक तस्वीर
Previous कमाएर जिन्दगी सुखी बनाउँला भनेर दुबई गएका बिचरा शिब कामबाट निकालिए, सात महिनादेखि अलपत्र
Next हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?